Kumele siwine nakanjani kwiTTM - Rulani - Impempe
Kumele siwine nakanjani kwiTTM – Rulani
April 6, 2021 April 6, 2021 Impempe.com
URulani Mokweza weMamelodi Sundowns
IMamelodi Sundowns kuzomele idlale kangcono kunanomdlalo odlule lapho idedele khona amaphuzu amabili yize yayingawuwuna lo mdlalo weDStv Premiership.
Kulo mdlalo amaBrazilians abambane neBlack Leopards, esemsileni kwi-log, ngo 1-1 singekho nesincane isidingo. Okuhlaluke kulo mdlalo ukuthi iSundowns inele yashaya igoli yazithela ngabandayo nokwenze ukuthi iLeopards ibuye ngamandla.
NgoLwesibili ntambama amaBrazilians azobhekana neTshakhuma FC ewukudla kwenduku emaqenjini amaningi. Umdlalo usePeter Mokaba Stadium, ngo-3 ntambama. Leli qembu ligcine lishaywe AmaZulu ngo 2-0 ngoMashi 21.
Nokho nakulo mdlalo iSundowns kumele iqaphele ukuthi ayilahli amaphuzu ibhekene neqembu elisendaweni yesibili ukusuka emsileni kwi-log. ISundowns isethubeni lokuvula igebe lamaphuzu libe ayisithupha esicongweni uma iwina lo mdlalo.
“Abadlali basesimeni esihle kakhulu, namalungiselelo abelokhu ehamba kahle. Siya kulo mdlalo weTTM ngemuva kokudlala umdlalo weCAF Champions League, okungumdlalo esingaziqhenyi ngawo ngendlela esidlale ngayo. Yonke imiphumela ngaphandle kwewini kwiSundowns isuke ifana nokuthi sihluliwe,” kusho umqeqeshi weSundowns uRulani Mokwena.
ISundowns ibambane ngo 0-0 ne-Al-Hilal koweChampions League ekuhambeni ngoLwesihlanu olwedlule.
“Siya kulo mdlalo sazi kahle ukuthi nakanjani kumele siwuwine. Sigqugquzeleke ngokwanele ukuthi siwuwine. Siyazethemba futhi siyazi siphethe amathemba enqwaba yamaSandawana. Iqembu likahle kakhulu futhi sibheke umdlalo omuhle,” kusho uMokwena.
Uthe kunzima kakhulu ukucubungula iTTM njengoba kuyinto abahlale beyenza kwamanye amaqembu.
“Yah ukucubungula iTTM akulula neze ngoba njengoba kusanda kufika uDylan Kerr ziningi izinguquko ezenzekile. Nokho sizamile ngendlela yethu ukubahlaziya ngendlela efanele. Bahle kakhulu uma behlasela,” kuchaza uMokwena.
ISundowns ivele isizibekisele indawo kuma-quarterfinal eChampions League. Lokhu kudlala kwayo kulo mqhudelwano kwenza isalele emuva ngemidlalo kwiDStv Premiership. Isadlale imidlalo engu-18 kuphela yeligi kodwa iyona ehamba phambili ngamaphuzu angu-40.
Previous Previous post: Ugcwele ukuzethemba uMasutha ngeqembu lakhe elisha
Next Next post: UNomandela uyanconcoza kuMpengesi ngokumnika ithuba